McCain waxay qorsheyneysaa inay furto warshad baradho - PotatoSystem
McCain waxay qorsheyneysaa inay warshad ka furto soosaarka shiilan faransiiska ee gobolka Tula
Jun 26, 07:44
в Dib u warshadaynta, Wararka Ruushka
Sida ay soo sheegeen Kommersant, Soo-saare cusub oo weyn oo ka mid ah hilibka shiidan ayaa laga yaabaa inuu ka muuqdo Ruushka. Hogaamiyaha suuqan adduunka waa shirkad Kanada laga leeyahay. McCain u sameeyay qaab dhismeedka warshad ka sameysan aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Uzlovaya (SEZ) ee gobolka Tula waxayna horeyba uga shaqeyneysaa mashruuc. Maxallinta ayaa suurtagal ka dhigaysa in lagu kasbado lacag dheeraad ah sababtuna tahay sicirka baradho ee jaban ee Xiriirka Ruushka iyo dhimista qarashka saadka.
Ku saabsan Diyaar u ahaanshaha Kanada McCain in la bilaabo dhismaha warshaddeedii ugu horreysay ee soo saarista shiiqyada Faransiiska ee dalka Ruushka, waxaa ku caan baxday diiwaangelinta. Bisha Juun McCain Cunnooyinka Holland BV iyo McCain Europa BV waxay ka aasaasay McCain Foods Rus LLC magaalada Uzlovaya, Gobolka Tula, oo hawlaheeda ay ka mid yihiin soo saarista alaabada iyo saxamada, iyo sidoo kale ka shaqeynta baradhada. Ilo ku sugan suuqa ayaa xaqiijiyay in McCain ka shaqeynta mashruuc warshadeed oo loogu talagalay soosaarka shiilan faransiiska, kaas oo la doonayo in lagu meeleeyo SEZ “Uzlovaya”. Shuruudaha maalgashadayaasha waxaa ka mid ah waajibaadka soo dejinta eber iyo qiimaha canshuurta ilaa iyo 2065, iyo tobanka sano ee ugu horreeya, heerka canshuurta dakhliga waa 2%. Xafiiska Yurub McCain faallo degdeg ah lama bixin. Hay'adda horumarinta ee gobolka Tula ayaa sheegtay inaysan weli bixin karin macluumaadka ku saabsan mashruuca.